Famantarana fa vonona amin'ny fianarana an-trano ny fianakavianao - Victor Mochere
Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia zava-dehibe ny fahalalana ny zanakao: ny fombany, ny fitondran-tenany, ny fomba fianarany ary ireo famantarana rehefa misy zavatra tsy mety. Ny ankizy manana olana amin'ny sekoly nentim-paharazana dia mety mampiseho famantarana isan-karazany toy ny fidinan'ny naoty, ny toetra maha-ketraka, ny fiovan'ny toe-po, ny fialana amin'ny fari-piainan'izy ireo, ny fangatahana hipetraka matetika any an-trano ary ny mody marary mihitsy aza mba hialana any am-pianarana. Raha toa ny mpianatra tsirairay dia mety hanana iray na maromaro amin'ireo famantarana ireo mandritra ny fianarany, raha toa ka maro ny famantarana amin'ny fotoana voatondro na toa tsy mandeha ireo famantarana ireo dia fotoana tokony hanaovana resadresaka amin'ireo ankizy .
1. Toetra ketraka
2. Fiovan'ny toetr'andro
3. Midina naoty
4. Miala amin'ny faritry ny fiaraha-monina misy azy ireo
Ny fanerena ny ankizy dia tsy maintsy mitazona ny mpiara-mianatra aminy na amin'ny lafiny akademika na eo amin'ny fiaraha-monina. Ny fandaharam-pianarana homeschool tsara indrindra dia manolotra fandaharam-pianarana voamarina miaraka amin'ny fidirana amin'ny vavahady an-tserasera sy ny fifandraisana amin'ireo mpampianatra efa za-draharaha mba hahazoan'ny mpianatra fanabeazana an-kalitao tsy misy fihenjanana sy fitakiana ivelany hisarika ny sain'izy ireo. Ity fomba ity dia malaza satria mamela ny fianakaviana hanararaotra ny fampianarana an-trano nefa tsy hametraka ny ankamaroan'ny faneren'ny fampianarana amin'ny ray aman-dreny satria mety tsy hahatsapa ho mahay na vonona handray andraikitra izy ireo.
Betsaka ny fianakaviana amin'izao fotoana izao no manana fidiram-bola indroa izay iarahan'ny ray aman-dreny miasa any ivelan'ny trano, ka saika tsy ho vitany ny mampianatra ny zanany any an-trano na dia fantatr'izy ireo aza fa io no safidy tsara indrindra noho ny fahasembanana mianatra, ny fivezivezena matetika na ny olana ara-pahasalamana. Raha tokony hijerena ny fampianarana an-tokantrano ho fomba hafa mahasorena, ny programa homechool tsara indrindra no vahaolana mety amin'ny fianakaviana tsirairay. Ny làlana an-tserasera tsirairay dia misy planner izay mandroso ny fandaharam-potoana hamitana ny fanendrena azy nefa miaraka amin'ny fahafaha-manao zavatra bebe kokoa na kely amin'ny andro iray.
Ireo mpampianatra maharitra dia miara-miasa amin'ny mpianatra hanazava ny hevitra, hamaly fanontaniana ary hampamoaka azy ireo amin'ny famitana ny fianarany amin'ny fotoana mety. Io dia ahafahan'ny ray aman-dreny manana andraikitra amin'ny maha mpanohana azy sy mamporisika azy mandritra ny asany andavan'andro ary tsy mahatsiaro tena ho meloka loatra amin'ny fananana andraikitra bebe kokoa amin'ny fitakiana ny asa. Ny fifindran-toerana sy ny zava-mitranga hafa dia tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny fandaharam-pianarana fa manome ny fahafaha-manala hanamaivanana ny adin-tsaina amin'ny fihaonana amin'ny fandaharam-potoanan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
Zava-dehibe ny naoty indrindra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa izay misy akony amin'ny GPA an'ny mpianatra sy ny firaketana an-tsoratra. Raha toa ka latsaka tampoka naoty tampoka ny mpianatrao na miady mafy mba haharaka ny ambiny kilasy dia mety ny fanapahan-kevitra ho any an-tokatrano no fanapahan-kevitra mety. Tokony ho hitan'ny ray aman-dreny raha misy kilema amin'ny fiankinan-doha mila dinihina ary horesahina amin'ny zanany ny anton'ny naoty ambany. Zava-dehibe ny fihainoana tsara izay voalaza sy tsy voalaza ary tokony hasiana fiheverana mafy mba hiarahan'ny fianakaviana mitady ny vahaolana tsara indrindra.
Ireo mpianatra manana adim-pianarana sasany dia matetika no manao tsara indrindra amin'ny fandaharam-pianarana any an-tokantrano tsara indrindra satria tsy misy fanerena, afaka mianatra amin'ny hafainganan'izy ireo izy ireo ary ny fandaharam-pianarana dia natao hiasa ho an'io ambaratonga io. Ny loharanom-pahalalana fanampiny toy ny fanandramana fanao, ny fampianarana ary ny fidirana amin'ireo tranomboky an-tserasera sy ny fitaovana dia omena ny fisoratana anarana amin'ny programa mba hahafahan'ny mpianatra rehetra mahatratra ny fahafaha-manao ambony azony miditra sy ivelan'ny 'kilasy'.
Ny naoty any amin'ny lisea dia maninona raha manantena mialoha ny oniversite ianao. Ny grade point average (GPA) dia voalaza fa iray amin'ireo antony lehibe mety hodinihin'ireo oniversite rehefa hanapa-kevitra ny hanaiky na handà mpianatra izy ireo. Noho izany, kajy fotsiny ny GPA ho an'ny zanakao amin'ny alàlan'ny kalkulator gpa amin'ny Internet. Azonao atao koa ny manandrana calculator UF GPA amin'ny calculator-an-tserasera mba hanisa ny salan'isan'ny isa mifanaraka amin'ny semester ankehitriny.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fampianarana any an-tokantrano dia ny fampidirana azy amin'ny sokajy rehetra mba hahafahan'ny ray aman-dreny mandray an-tsakany sy an-davany io fomba io manomboka amin'ny ankizy hatrany am-piandohana. Ny mpianatra amin'ny lisea angamba no mety hangataka an'ity switch ity satria te hifantoka amin'ny akademika izy ireo ary leo ny tantara an-tsekoly any am-pianarana. Ny zava-dehibe dia ny firesahana matetika ny fanovana sy ny eritreritra mba hahazoana antoka fa mahazo izay ilainy ny mpianatra na aiza na aiza misy azy ireo amin'izany fotoana izany.
Rehefa miresaka momba ny mety ho fampianarana any an-tokantrano dia tsara raha ampidirina ny tsirairay mba hahafahan'izy ireo mizara ny eritreriny sy ny ahiahiny. Matetika, izay toa sakana amin'ny lalana, dia ny tsy fahatakarana ny fizotrany na zavatra azo vahana amin'ny alàlan'ny fomba hafa. Ny ankizy mahatohitra ny hevitra dia mety manahy ny amin'ny tsy fananany namana fa ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny klioba eo an-toerana sy ny vondrona homeschooling dia afaka manampy azy ireo hahatsapa ho maivamaivana kokoa.
Ny ray aman-dreny izay manahy momba ny vola lany sy ny fampiasam-bola dia tokony hanao fikarohana an-tserasera sy hiresaka amin'ny ankizy any an-trano mba hahafahan'izy ireo mahita ny safidy rehetra misy ao anatin'izany ny programa an-tserasera izay kely dia kely no takiana amin'ny ray aman-dreny ary mora ny vidiny. Ny fomba tsara indrindra hiantohana ny fahombiazana amin'ity làlana ity dia ny fiaraha-miasa amin'ny maha-fianakaviana, mametraka ny antenaina antenaina ary mamorona tontolo iray izay mahafinaritra sy mahaliana ny fianarana miaraka amin'ny tombony izay sady mifantoka amin'ny fotoana fohy no maharitra.
Fampiharana teti-bola 10 tsara indrindra ho an'ny mpianatra 2022
Tombony azo amin'ny lalao an-kalamanjana ho an'ny fahasalamana ho an'ny ankizy
Ashly Williams dia mpanoratra tsy miankina, manana traikefa an-taonany maro, mamorona atiny ho an'ny vavahady sy tranokala maro isan-karazany. Izy dia manana fahaizana amin'ny fanoratana momba ny fanabeazana, ny asany, ny fampianarana ary ny fianarana.